Windows 10 iya kubonelela ngomgangatho ophuculweyo weaudio yee-AirPods, iTunes kunye neApple Music | Ndisuka mac
Uhlaziyo olukhulu olulandelayo lwe Windows 10 kamva kulo nyaka iya kubandakanya inkxaso ephuculweyo yee-AirPods, i-iTunes, kunye nabasebenzisi boMculo weApple. Kwiposti yebhlog, UMicrosoft uthi uceba ukongeza inkxaso ye-AAC okanye i-encoding yeaudiyo ephezulu yezixhobo zeBluetooth. Iya kubonelela ngomgangatho ophuculweyo wesandi.
Okwangoku iWindows ixhasa kuphela i-SBC kunye ne-aptX codec yezixhobo zeBluetooth. Nangona kunjalo kucwangcisiwe ukuba uhlaziyo olulandelayo lwe Windows 10 kamva kulo nyaka luza kubandakanya inkxaso ye-AAC, okanye ukuqhubekeka kwekhowudi yomsindo kwizixhobo zeBluetooth. Ke ngoko iya kubonelela ngomgangatho Ukuphuculwa komsindo kwii-AirPods, i-iTunes, kunye nabasebenzisi be-Apple Music.
Kunye nenkxaso ye-AAC, uhlaziyo lweWindows 10 luya kwenza kube lula Ukukhethwa kwee-headphone zeBluetooth, izithethi kunye neefowuni ukusuka kwibar yeWindows. Njengoko uMicrosoft echaza kwibhlog:
Awusayi kuphinda ucofe ii-endpoints ezininzi zokumamela kwilizwi lakho leseti yentloko kunye nemakrofoni ukuze usebenze kakuhle. Ngoku siveza isiphelo sesandi kwi-UI kwaye siya kutshintshela ngokuzenzekelayo kwindawo echanekileyo yamava angenamthungo. Ngaba umamele i-Spotify kwaye emva koko kufuneka utsibe umnxeba wamaQela? Ngoku unokulawula ngokuthe ngqo umthamo wee-headphone zakho.
Iimpawu ezintsha, ezihamba kunye nokulungiswa kwe-bug kunye nophuculo, ziya kufumaneka kubo bonke Windows 10 abasebenzisi Kamva kulo nyaka. Nangona kunjalo, amalungu enkqubo ye-Windows Insider anokufumana uguqulelo lwe-beta ngezona zongezo zintsha kunye nohlobo lwamva nje.
Olona loncedo lubalulekileyo lokuba yinxalenye Windows Insider Abasebenzisi abanolwazi oluncinci kukuba unokuba nayo Windows 10 yasimahla ngokusemthethweni. Ewe kunjalo, iinguqulelo zolingo ubuncinci. Ukuba ufuna ukuba yinxalenye yeWindows Insider, Kuya kufuneka ubhalise kuseto lweWindows kuhlaziyo kunye nezokhuseleko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Windows 10 iya kubonelela ngomgangatho ophuculweyo weaudiPods, iTunes kunye neApple Music
Kufuneka wenze ntoni xa ufumana i-AirTag kwimowudi elahlekileyo